လုပ်ဆောင်ချက် 5-တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစီအစဉ်။ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ညနေပိုင်း fapstronauts ...
ပထမ ဦး စွာအောက်ပါတို့ကိုဆင်ခြင်ပါ။ fapping ကိုရပ်တန့်ချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သင်တစ်နည်းနည်းနဲ့ 'give-in' နှင့် fap ကိုလုပ်သည်။ အရက်သမားများသည်သောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုသော်လည်းသူတို့သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့် 'အရှုံးပေးခြင်း' ကိုသာပြုကြသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကိုရပ်တန့်လိုသော်လည်း၊ မအောင်မြင်သောလူများသည်အောင်မြင်လိုကြသော်လည်းထိုအောင်မြင်မှုအတွက်တန်ပြန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်သူတို့သိသောအရာများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ငါဒီနှင့်အခြားအလားတူဖြစ်ရပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ကြောင်းခိုင်လုံသောနိဂုံးချုပ်ဖို့ငါ့ ဦး ခေါင်းပတ်ပတ်လည် floating ခဲ့အချို့သောအခြားပုံမှန်မဟုတ်သောအသိပညာနှင့်အတူကပေါင်းစပ် ...
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား သငျသညျကုန်ကျစရိတ်အားလုံး '' သက်သာခြင်းရှာအံ့သောငှါအဓိကပရိုဂရမ်သည်သင်္ဘောထဲမှာခရီးသည်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ 'မြင့်မားသောမျှော်လင့်ချက်များ' နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်နှစ်ချက်ကိုမဖော်ပြပါ။ သင့်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိလျှင်သင်လုပ်လိမ့်မည် ဘယ်တော့မှ သင်သည်သင်၏ဦးခေါင်း၌ရှိသည်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်။ များစွာသောအစွဲကိုရပ်တန့်ဖို့သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့၏စှဲခွငျးအားဖွငျ့သေဆုံးခဲ့သည်။
တကယ်ပဲသင်ဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်မရှိကြပေ။ အခြေချနေထိုင်ကြောင်းပါစေ, သင်ကခရီးသည်ဖြစ်ကြသည်။
ငါတို့သည်ဤလွန်းနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဆိုထားသည်သောဦးနှောက် (ရှင်သန်မှုယန္တရား) ၏ reptilian အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်ပြုမိအပေါငျးတို့သသုတေသနကြောင့်တစ်ဦးသိပ္ပံနည်းကျအမြင်ကနေစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ကိုငါသိ၏။
သို့သော်ဤသတင်းသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ဆိုးရွားလွန်းသကဲ့သို့ဤသတင်းသည်လက်တွေ့ကျပြီးလက်တွေ့ကျသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်။ ကျိန်ခြင်းခံရသောကြောင့်သင်ပျက်ကွက်ခြင်းမဟုတ်။ မင်းကအားနည်းနေလို့ခင်ဗျားကထပ်ပြန်ဖြစ်မလာဘူး။ သင်စီးနင်းနေသောသင်္ဘောကိုသင်မထိန်းချုပ်နိုင်သောကြောင့်ဤတိုက်ပွဲ၊ အသက်အတွက်တိုက်ပွဲကိုသင်ရှုံးနေပြီ။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်သာအနည်းငယ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးကြောင်းဥပစာကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သငျသညျစီးခန္ဓာကိုယ်တဦးတည်းအရာအဓိကအား, လုံခြုံရေး (/ နှစ်သိမ့်) ရှာတတ်၏။ သငျသညျရှင်းရှင်းလင်းလင်းညွှန်ကြားချက်များနှင့်အစိုင်အခဲစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမှတဆင့်လုံခြုံရေးနှင့်အတူကပေးကြသည်မဟုတ်လျှင်, သင်လျစ်လျူရှုခံရပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ရှင်သန်မှုအခြေအနေများအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်နိုင်လျှင်အသကျရှငျကိုယျတိုငျကကိုစောင့်ရှောက်ရန်နည်းလမ်းရှာပါလိမ့်မယ်ဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရုံအခြေစိုက်စခန်းလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်ကြောင်းပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ သငျသညျမဟုတ်ရင်အသက်တာ၏သင့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုနည်းနည်း shit နိုင်ပါတယ်, ဖွဲ့စည်းထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
re-ရရှိထိန်းချုပ်မှုမှ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကမင်းရဲ့နေ့တွေကိုပိုကောင်းအောင်စီစဉ်တာလောက်မလွယ်ကူဘူး။ သင့်မှာပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုများရှိခဲ့ရင်သင်ဟာမြေပြင်ကနေပြန်လည်ထူထောင်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ နေ့စဉ်ထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်လည်ရယူပါလိမ့်မယ်။ ငါစွဲလမ်းခဲ့ဖူးတဲ့အရာတစ်ခု၊ အရာအားလုံးဟာငါ့ရဲ့ဂိမ်းပဲ။ အခုတော့အဓိကစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံး၊ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ကတော့ဒီ 'နောက်ဆုံးပြပွဲ' ကိုငါလာခဲ့တာ၊ ငါဟာမစုံလင်ဘူး၊ ဤအရာသည်အလုပ်လုပ်သည်။ နေအောက်တွင်မိမိကိုယ်ကိုကူညီသည့်စာအုပ်တိုင်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၊ သင့်အတွက်အောက်ပါလုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးပြုပြင်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့သည်။
1) သင့်မျှော်မှန်းချက်ပထမဦးဆုံးအတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာထွက်ရှာပါ။ ကိုယ့်ကိုခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏အများဆုံးစိတ်အေးလက်အေးပြည်နယ်အတွင်းရှိအခါအိပ်ရာမဝင်မီကပြုအိပ်မက်ထိုင်ခြင်းနှင့်နေ့ဖြစ်၏။ အသံတစ်သံအသံဖမ်းသုံးပါ။ သငျသညျဖွစျခငျြသကဲ့သို့ရယ်စရာဖြစ်, သရုပ်မှန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချထားရန်ဖွင့်အခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ, အာကာသမှဒဏ်ငွေကိုသွားချင်တယ်။ သငျသညျဒဏ်ငွေလာမည့်ကြီးတွေ MMO ဖန်တီးချင်တယ်။ သင်, တစ်ဦးဂြိုဟ်သိမ်ပိုင်ဆိုင်ဒဏ်ငွေချင်တယ်။ သငျသညျဒဏ်ငွေ, တောင်ပေါ်မှာတစ်ဂူမှာနေထိုင်ချင်ကြတယ်။ သငျသညျမှမှန်သမျှကသူတို့နှင့်အတူသွားရ, သင်မှမှန်သည်။ သေးငယ်တဲ့အိပ်မက်မရှိဘူးလား, အသက်ရှင်ခြင်းအဘို့သင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကသင်၏မျှော်မှန်းချက်ကနေလာပါတယ်။ အဆိုပါပိုကြီးပြီးပိုညစ်ညမ်းသောပိုကောင်း!
2) ကကြောင်းကိုနားလည်ပါ သင်၏နေရာ မင်းကိုသတ်မှတ်ပေးတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖတ်ရှုခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ “ အခုငါလိုချင်တာအားလုံးကိုရတော့မယ်!” ထပ်မံနောင်တနှင့်အတူနောက်နေ့စတုရန်း 1 မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရှာတွေ့မှသာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn လိုမူးယစ်ဆေးဝါးလိုပဲ၊ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖတ်တဲ့အခါမှာမင်းကအင်ဒေါဖင်းနဲ့ dopamine ကိုလွှမ်းမိုးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းအရမ်းပျော်တယ်။ အင်ဂျင်စတင်ရန်ကောင်းသော်လည်းနောက်ထပ်ဘာမျှမဆိုလျှင်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မြင့်မားသည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုအမှန်တကယ်အောင်မြင်ရန်သေချာစေရန်သင်၏“ စိတ်ခံစားမှု” သို့မဟုတ်“ အခြေအနေ” ရှိလင့်ကစားသင်၌ကောင်းသောအကျင့်များလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ခဲယဉ်းပြီးအချိန်နှင့်စွမ်းအားပါ ၀ င်မှုရှိသော်လည်းကောင်းမွန်သောအလေ့အထများသည်သန်းကြွယ်သူဌေးများနှင့်မအောင်မြင်မှုများအကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းပါတယ်
အခက်အခဲအားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ။ အလေးအနက်ထား! ဒါကကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကသင်၏ porn အားလုံးကိုဖျက်ပစ်ရန်၊ သင်၏ k3 လုံခြုံရေး blocker ကိုထားရန်၊ သင်၏ fap ဇုန်မှဝေးဝေးနေရန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည်အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျလက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အချို့သောအလေ့အထများကိုအားပေးအားမြှောက်လျှင်သင်အခြေခံကျကျကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲရန်ရှိသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလေ့အကျင့်ဟောင်းသို့မကျရန်အခွင့်အလမ်းပေးရန်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါနှစ်နှစ်အတွင်းမသောက်ကြပြီ ငါဟာအရက်မူးပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး။ အခုငါ့ကိုတွေ့တဲ့သူတိုင်းငါမသောက်နိုင်၊ ငယ်လွန်းလို့မနေနိုင်ဘူး၊ ငါအမြဲတမ်းချီးမွမ်းတယ်၊ အချိန်တိုင်း ငါ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲ? ငါအချို့သောဘုရားပါဝါပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ဘူး! ငါသောက်ဖို့သွေးဆောင်ခံရတယ်သို့မဟုတ်ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်အတွက်အလုံအလောက်အစိုင်အခဲသည်အထိသည်အထိသောက်ရန်အားပေးလိမ့်မယ်ဘယ်မှာမဆိုပတ်ဝန်းကျင်ကနေ fuck ဆိုတဲ့ပဲနေခဲ့တယ် သိ ငါမသောက်တော့ဘူး ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကများများစားစားမနေနိုင်တော့ဘူး၊ မသောက်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ သို့သျောလညျး, ငါမာနထောင်လွှားဖြစ်၏, ငရဲမျှမ, မှား၏လုံလောက်သောမှားယွင်းတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသိရ နေရာမှား ငါအလေးအနက်ထားနောက်တဖန်မသောက်ရမှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနိုငျသညျ။ သို့သော်ရှိသမျှတို့ကိုငါပြင်ပသေချာဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှကြောင်းအောင်စီမံခန့်ခွဲ!
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုနားထောင်ပါ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အချက်ပြမှု၊ လိုအပ်ချက်နှင့်ပုံစံများကိုနားလည်ရန်ကျွမ်းကျင်သောဆရာတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်လိုအပ်သည်။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်ရက်ပေါင်းများစွာအဘို့အ Streak ရှိသည်, ထို့နောက်အရာအားလုံးကတ်၏အိမ်ကဲ့သို့ပြိုကျသည်။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်အလေးအနက်ဆင်ခြင်သောအခါငါ 'one' variable စလစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ပြင်ရန်အခွင့်အလမ်းရရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီသေးငယ်တဲ့ variable တစ်ခုကအရာရာကိုပျက်စီးစေတဲ့ဒိုမီနိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစတင်ခဲ့တယ်။ ယခုတွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြောင်းလဲမှုတိုင်းတွင်ထိပ်ဆုံးရောက်ရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲသည်၊ သို့သော်သင်၌အချိန်ရှိသည်၊ သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ သင်၏စိတ်ထဲပေါ်ပေါက်လာသည့်တောင်းဆိုမှုတိုင်းကိုသင့်အားအသိပညာပေးရေးကိုနေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ပါ သင်၏မြင့်မား Aspire မပါဝင်ပါဘူး IS ထိုအရာများကို 'ခန္ဓာကိုယ်၏လိုအပ်ချက်' သို့ဖြည့်စွက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်မအိပ်ချင်ပါ။ ထို့ကြောင့်နံနက်ယံ၌ထ။ “ ၁၅ မိနစ်အတွင်းနေမကောင်းပါ၊ အိပ်ရာထပါ” ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသောအခါခန္ဓာကိုယ်သည်ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းချက်ချင်းသိသည်။ အိပ်ပျော်ခြင်းဟာငါမဟုတ်ဘူး လိမ့်မည် သေးငါကလုပ်နေတာခံရဖို့ပုံရသည်။ တနည်းကား၊ သင်လိုချင်သောအရာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏လိုအင်ဆန္ဒများသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးတစ်ခါတစ်ရံဆန့်ကျင်သောအရာများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဦး စွာခြားနားချက်ကိုအရင်လေ့လာပါ၊ ထို့နောက်သင်၏မြင့်မားသောမျှော်မှန်းချက်များကိုရရှိရန်သင်၏ဘဝကိုတည်ဆောက်ရန်သေချာစေပါ။
***** ***** တစ် breather ကိုယူ
Jigsaw ၏နောက်ဆုံးအပိုင်း။ ခိုင်မာတဲ့သိပ္ပံပညာအပေါ်အခြေခံပြီးမဟုတ်ဘဲ၊ စွဲလမ်းမှု၊ စွမ်းအား၊ အောင်မြင်မှုစသည်တို့ကိုငါဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်များစွာထဲက .. ဒီဟာကရှုပ်ထွေးပြီးခိုင်မာသောသိပ္ပံပညာအပေါ်အခြေမခံတဲ့အတွက်ဒီအချက်ဟာငါတည်မြဲတည်တံ့စေခဲ့တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးညီမျှခြင်း။
Dopamine, သင့်အဆိုးဆုံး fuck ဆိုတဲ့ရန်သူပါ! ဒါဟာခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်နှိုးဆွ Over-သေးသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သန်မှုယန္တရားတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းနေတစ်ဆင့်။ ငါ့ကိုငါ့အဘို့ငါ့အလိုရှိသမျှကန့်ကွက်နေသော်လည်း, ခိုင်မြဲစွာမောင်းနှင်မှုထိုင်ခုံများတွင်ခန္ဓာကိုယ်ထားကြောင်း dopamine နှုန်းကိုမြင့်တက်စေတဲ့အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုစာရင်းပြုစုကြပါစို့။ နီကိုတင်း, သလိုမျိုးကက်ဖိန်းဓာတ်ဆီပါသောအစားအစာများ, သကြား, အသစ်အဆန်းများ, လိင်, အကြီးစားလူမှုရေး။
သင့်ခန္ဓာကိုယ် dopamine များအတွက်အရသာရရှိသွားတဲ့ပြီးတာနဲ့မြောက်မြားစွာစမ်းသပ်ချက်မှာပြထားပြီးအဖြစ်ပြုလုပ်ရုံသင်သည်အိပ်ပျော်ဖြစ်စေတိုင်အောင်, dopamine ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးသို့လိမ် Interrupt သို့မဟုတ်စသည်တို့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ကြောင့်သံသရာကိုချိုးဖျက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်လေ့လာခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်စမ်းသပ်မှုရှိခဲ့သည် ကြွက်, ဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်ကြွက်များသူတို့ရဲ့ dopamine receptors အထိချိတ်ဆက်လျှပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကြွက်တစ်ဦးရှေးခယျြမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ dopamine receptors လှုံ့ဆော်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုအစားအစာပေးတော်မူမည်တဲ့လီဗာထိမှန်ပါလိမ့်မယ်တဲ့လီဗာ hit ရန်။ ဒါဟာတစ်ဦးဖြစ်စေ / သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရလဒ်ကို, ငတ်မွတ်နေတဲ့ကြွက်အများကြီး။ ဤရွေ့ကားကြွက်စာသားသူတို့ကိုယ်တိုင်သတ်ဖြတ်တက်အဆုံးသတ်မယ်လို့ရှိရာအမှတ်, ဒီလီဗာ hit ထက်ကိုစားလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအလားတူအမှုကိုပြုစေသည်စွဲ၏နံပါတ်စဉ်းစားကြည့်ပါပေမယ့်လူသားတစ်ဦးအဆင့်ပေါ်မှာ။
ယခုပုံမှန်အခြေအနေတွင်ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြီးမားသောပြproblemနာမဟုတ်ပါ။ dopamine စွဲလမ်းမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောဘဝကိုသင်နေထိုင်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ဘ ၀ နှင့်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်ပါကသင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုမစတင်မီ dopamine အစပျိုးသည့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကြီးမားသော plug ကိုထည့်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့မှအချိန်တိုင်းသူတို့၌လုံးဝသတိရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် dopamine မြင့်မားသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် fap ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် dopamine အလွန်မြင့်မားသောအခါမည်သည့်အကြောင်းပြချက်များရှိသနည်း။ '' ငါးမိနစ်လောက်ပဲပြေးမယ် '' စသည်တို့…။ ငါတရားအားထုတ်ရန်ထိပ်ဆုံးရောက်နေပြီးနေ့ရက်တိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ dopamine အလွန်အကျွံထွက်မလာသောအခါပြproblemနာတစ်ခုမဟုတ်ပါကတိုက်တွန်းမှုများသည်ကျွန်ုပ်ကိုပင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုလုပ်ခဲ့လျှင်ကော်ဖီအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သူစိမ်းတစ် ဦး နှင့်ပရောပရည်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအရာများသည်လာမည့်နာရီအနည်းငယ်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်ကနောက်ထပ် dopamine hit ကိုရှာနေသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဗဟိုပြုပြီးအာရုံစူးစိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားပြန်ရောက်အောင်ထိန်းချုပ်ပြီးပြန်လည်တည်ငြိမ်အောင်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်အပေါ်၌မူတည်သည်။
ဒါဟာနီးကပ်ကြောင်းအတွေးအခေါ်တွေမှလာမယ့်အစဉ်အဆက်မှကာကွယ်ရန်သငျသညျအထိဖြစ်ပါသည် အကြောင်းရင်းမှာ dopamine spikes နှင့်အတူအားလုံးဆအပြုအမူတွေမှာတားဆီးသည်။
LINK - အဆိုပါနောက်ဆုံးသဘောပေါက်
တရားဝင် NoFap Challenge ကိုတရားဝင်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂ နှစ်ကြာအဆက်မပြတ်အမှားများနှင့်အဆုံးမဲ့စိတ်ပျက်ရမှုများရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ဇွဲရှိခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည် 'လူကြီး' ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည့်ကျွန်ုပ်၏အကျင့်စာရိတ္တကိုထပ်ဖြည့်ခဲ့သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်ကိုသွားပါ။
ဒီအသိုင်းအဝိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ကြီးမားသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် 'လျှို့ဝှက်သောငံပြာရည်' ကိုအခြားသူများအားကူညီခြင်းအားဖြင့်ရပ်ရွာအားပြန်ပေးရန်ကြိုးစားသွားမည်။ ကျွန်ုပ်သည်အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များအားလုံးကိုရှင်းပြသည့်ရှည်လျားသောပို့စ်ကိုရေးနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်သင်၏အချိန်နှင့်မင်းတို့ကိုဖြုန်းတီးနေသည်ဟုရိုးသားစွာဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုအတွက်နိယာမအားဖြင့်စွန့်လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။
ငါဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ကောင်းပြီ၊ fapping ကိုရပ်တန့်လိုသည့်သင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤတွင်လာသူတိုင်းအတွက်သူတို့၏ 'စစ်မှန်သောမိမိကိုယ်ကို' သို့မဟုတ် '' စံပြမိမိကိုယ်ကို '' ဖြစ်သည်။ သင်၏အခြေခံအားဖြင့်သင်၏လက်ကိုင်ကိုခြေအိတ်များထဲသို့ထည့်သွင်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါကနည်းနည်းဆံပင်မရှိတဲ့အဝတ်အစားမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းဖြစ်ချင်တဲ့မင်းရဲ့ဗားရှင်း။
သို့သျောလညျး, သငျသညျအစဉ်အမြဲဒီအဆင့်အတန်းသတိအဆင့်ဆင့်ဖြစ်လျက်ရှိမဖြစ်နိုင် - ဘာကြောင့်လဲ
အမှန်ကတော့ငါ့အတွက်ရောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူပုံစံများ (မင်းရဲ့ကလေးဘဝကိုအမြဲတမ်းအစဉ်သဖြင့်) ခံစားနေရတဲ့လူအမြောက်အများအတွက်ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကောင်းတဲ့ခံစားချက်မရရှိလာအောင်ပြိုကွဲစေခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာကငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရပြီး fap ကိုအဖြေတစ်ခုအဖြစ်အကြံပြုတဲ့အခါငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းကိုမှတ်မိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်သဲလွန်စငါတော့ဘူး fap မဟုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်အဖြစ်) ။ 'ငါဘယ်သူလဲ' အပေါ်ခိုင်မာမှုမရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်ဆင်ခြေများစွာပေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသူကိုယ်တိုင်၏လမ်း၊ အချိန်နှင့်အချိန်ကိုပြန်လည်ရရှိစေခဲ့သည် (nofap ကိုနှစ်နှစ်ကြိုးစားခြင်း၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ပျက်ခြင်းကတကယ့်သား) ဖြစ်သည်။
ငါအဆက်မပြတ်ငါ့အတန်ဖိုးများအကြောင်းကိုတိုတိုအသံမှတ်စုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ခြင်း၏ဆက်လက်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဤသူအဆုံးမဲ့ relapses ကိုချိုးဖျက်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ, ငါ့လို, ငါ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ငါ၏အ Self-တန်ဖိုးရှိ... အသံမှတ်စုသည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းကိုရည်ရွယ်သည် စိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ် ငါလိုချင်တဲ့သူရဲ့ ... နောက်ဆုံးမှာငါစိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုင်တွယ်ရန် fapping အဖြစ်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအကြံပေးသည့်အခါ nofap ကိုအဘယ်ကြောင့်ကျူးလွန်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဥာဏ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်သည်အလုံအလောက်ရရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းသော fuck ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်မိနိုင်မှာလဲ စိတ်ကူး '…တကယ့်သော့ချက်ကစိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ်ရှိဖို့၊ ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုလိုချင်တာထက်ပိုပြီးစီးနင်းနိုင်အောင်စွမ်းအားကြီးတဲ့မှတ်ဥာဏ်ရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကအချိန်နဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုတွေနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုတယ်၊
(“ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်ပစ္စည်းတွေအရမ်းနက်ရှိုင်းလာတယ်၊ ငါအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့လှည့်ကွက်တွေထဲကိုငါမဝင်ချင်တော့တာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့အားလုံးဟာဒီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့အတွက်စာအုပ် ၃ အုပ်လောက်ကူညီရလိမ့်မယ်၊ သင်နှင့်သင်သိသောသူအားလုံးထက်ဘာကြောင့်ပိုကောင်းနေမည်ကိုစဉ်းစားခြင်း၊ သင်က pad and pin နှင့်အတူထိုင်ခြင်းနှင့်သင်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏အပြုအမူပုံစံများကိုပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာမှတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်လက်စွဲကိုတွက်ချက်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာယူနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်မည်သို့ပျံသန်းရမည်ကိုလေ့လာပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်အားမလွယ်ကူပါ။
ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ခရီးရှည်လျားနေသေးသော်လည်းကြယ်ငါးပွင့်အားတရားဝင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည်၊ အချို့သူများအတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိသော်ငြား ၄ င်းနာရီကို ၄၅ နာရီမှ ၅ နာရီအထိအနားယူပြီးနောက်ပြန်လည်ပတ်ခြင်းအပြီးမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သည်ဟုခံစားရသောဤငယ်ရွယ်သောကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ( ဖြစ်ရပ်မှန်များစွာ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်များစွာ) ကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမဖြစ်နိုင်ဟုထင်မြင်ခဲ့သောအရာတစ်ခုခုကိုအောင်မြင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဇာတ်ကောင်ကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ ကြိုးအသစ်များထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှအမှန်တကယ်ပင်ကျွန်ုပ်၏အပြာရောင်ကြယ်ပွင့်ကကျွန်ုပ်ကိုလည်းသက်သေပြသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းကိုယခုကျွန်ုပ်ပုံမှန်တွေ့ကြုံခံစားနေရသည့်စဉ်ဆက်မပြတ်ရုန်းကန်နေရခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ခြင်းတို့သည်လုံးလုံးထိုက်တန်၏။ မင်း လို ဤနေရာတွင်ငါ့ကိုချီ join ဖို့, အ fapping ကြိုးများနှင့်မဆိုအကြီးတစ်ဦးချင်းစီကသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်း dont အောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Muh အပြာရောင် Starrr